Posted by ZT at 12:19 AM
pager ခေါ်လိုက်ရင် ပြန်ဆက်မယ့်ဟာကို.....
ယုံလိုက်မယ် ကzt ဘာကျွေးမှာတုန်း.....
any body called me?..
ခါးမှာ ချိတ်ထားရင် အတော်ကြည့်ကောင်းတယ်.။
ကိုဇက်တီတို့ Globalization ကိုတကယ်ပဲလက်ခံတာကိုး။ Captain စာမေးပွဲလာဖြေတဲ့ လူကြီးနဲ့ အခန်းဖော်ဖြစ်ဖူးတယ်။ ဒီလူကြီးတွေမလွယ်ဘူး။ ဒါနဲ့ .. Pager ဆိုတာ ဂစ်တာကြိုးညှိတဲ့ဟာလေးမျိုး။
ကိုZT အတွေ့အကြုံတွေက အဆန်းတွေချည်းဘဲ။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျောင်းတာ၃နှစ်တက်လို့ Diploma ရသွားတယ်။ ဒီလိုမျိုးတွေရှိမှန်းတခါမှမသိခဲ့ရပါ။ :D
1.မကလိုက်ရဘူးကွာ. နာတာဘဲ။ အင်းလေ လကိညောင်းသက်သာတာပေါ့ လက်ကြီး ဆန့်ဆန့်ပြီး ညောင်းထှာ. ခြေညောင်းလဲသက်သာတောပါ့. တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် မသွားဘူးလိုက်ဘူး.တစ်ချိုက ညလုံးပေါက် ကဘူးသတဲ့. ကဘူးတဲ့သူက ပြောတာပါ။
၃. အဲသည်တုံးက တို့က CDMA hand phone M one နဲ့ပေါ့ GSM မဖြစ်သေးဘူး.
၄. အဲသည်တုံးက သားက ကျောင်းတက်နေတုံး.
၅. တို့လဲ ကျောင်းတက်နေတုံး.
ကzt တို့ ရိုးသားကြောင်းတွေချည့် ဖတ်နေရတော့ မရိုးသားတဲ့ ကျနော်မှာ ငိုတောင်ငိုချင်လာပြီ..အီး...ဟီး...ဟီးးး..ရွှတ်..
မရိုးသားလို့ မရဘူး ကိုကြီးကျောက်ရဲ့။ ကျွန်တော်က မိန်းမယူဦးမှာ။ :D